Wararka - Warshadaha isgaarsiinta indhaha ma noqon doonaan "badbaadayaasha" COVID-19?
Bishii Maarso, 2020, LightCounting, oo ah hay'ad cilmi baaris ku sameysa isgaarsiinta indhaha, ayaa qiimeysay saameynta uu coronavirus-ka cusub (COVID-19) ku yeeshay warshadaha saddexdii bilood ee ugu horreysay ka dib.
Rubucii ugu horreeyay ee sannadka 2020 ayaa dhammaad ku dhow, adduunkana waxaa ku habsaday COVID-19 oo faafay. Wadamo badan ayaa hada riixay badhanka hakinta dhaqaalaha si loo yareeyo faafitaanka cudurka. In kasta oo darnaanta iyo mudada aafada iyo saamaynta ay ku leedahay dhaqaalaha aan wali la hubin inteeda badan, hadana shaki la’aan waxay sababi doontaa khasaarooyin aad u badan dadka iyo dhaqaalaha.
Marka laga soo tago dhibaatadan murugsan, isgaarsiinta iyo xarumaha xogta waxaa loo qoondeeyey inay yihiin adeegyo aasaasi ah oo aasaasi ah, oo u oggolaanaya howlgalka sii socda. Laakiin intaas intaas dhaafsiisan, sidee baan u fili karnaa horumarinta nidaamka deegaanka ee isgaarsiinta / isgaarsiinta indhaha?
LightCounting waxay soosaartay 4 gabagabo xaqiiqo ku saleysan iyadoo lagu saleynayo u kuurgalka iyo qiimeynta natiijooyinkii seddexdii bilood ee lasoo dhaafay:
Shiinaha ayaa si tartiib tartiib ah dib ugu bilaabaya wax soo saarkii;
Tallaabooyinka go'doomin bulsheed ayaa horseed u ah baahida baaxadda;
Kharashka raasumaalka kaabayaasha dhaqaalaha wuxuu muujinayaa calaamado adag;
Iibinta qalabka nidaamka iyo soosaarayaasha qalabka ayaa saameyn ku yeelan doona, laakiin masiibo ma noqon doonto.
LightCounting waxay aaminsan tahay in saameynta muddada-dheer ee COVID-19 ay noqon doonto mid ku habboon horumarinta dhaqaalaha dhijitaalka ah, sidaa darteedna ay ku sii fideyso warshadaha isgaarsiinta indhaha.
Khabiirka ku takhasusay cilmiga dhirta ee loo yaqaan 'Steintologist' Stephen J. Gould "wuxuu uqeexay sinnaanta" wuxuu aaminsan yahay in isbadalka noocyada uusan ku socon qunyar iyo joogteyn joogto ah, laakiin uu maro xasilooni waqti dheer ah, xiligaas oo uu jiri doono isbedel deg deg ah oo deg deg ah sababo la xiriira carqaladeynta daran ee deegaanka. Isla fikradda ayaa khuseysa bulshada iyo dhaqaalaha. LightCounting waxay rumeysan tahay in cudurka faafa ee coronavirus 2020-2021 uu waxtar u yeelan karo horumarka xawaaraha ku socda ee "dhaqaalaha dhijitaalka ah".
Tusaale ahaan, dalka Mareykanka, tobanaan kun oo arday ah ayaa hadda meel fog ka aadaya kulleejooyinka iyo dugsiyada sare, tobanaan malyan oo shaqaale qaangaar ah iyo loo shaqeeyayaashooda ayaa la kulmaya shaqo guri markii ugu horreysay. Shirkadaha waxaa laga yaabaa inay ogaadaan in waxsoosaarka aan la saameyn, waxaana jira faa'iidooyin qaar, sida hoos u dhigista kharashka xafiiska iyo qiiqa gaaska lagu sii daayo. Ka dib markii ugu dambayntii la xakameeyo cudurka 'coronavirus', dadku waxay muhiimad weyn siin doonaan caafimaadka bulshada iyo dhaqamada cusub sida dukaameysiga aan taabashada lahayn ayaa sii socon doona muddo dheer.
Tani waa inay dhiirrigelisaa isticmaalka boorsooyinka dijitaalka ah, dukaamaysiga qadka tooska ah, cuntada iyo adeegyada dirista cuntada, waxayna ku ballaarisay fikradahan aagag cusub sida farmasiyada tafaariiqda. Sidoo kale, dadka waxaa laga yaabaa inay ku duufsadaan xalalka gaadiidka dadweynaha ee caadiga ah, sida tareennada dhulka hoostiisa mara, tareennada, basaska, iyo diyaaradaha. Beddelka ayaa bixiya go'doomin badan iyo ilaalin, sida baaskiil wadista, taksiyo yar yar oo robot ah, iyo xafiisyo fog, isticmaalkooda iyo aqbalaaddooduna way ka sii badnaan karaan intaan fayrasku faafin.
Intaas waxaa sii dheer, saameynta fayrasku waxay daaha ka qaadi doontaa oo muujin doontaa daciifnimada iyo sinnaan la'aanta hadda jirta ee marin ballaadhinta iyo marin-u-helidda caafimaad, taas oo dhiirrigelin doonta marin ballaaran oo loo helo internetka xaddidan iyo midka moobiilka ee meelaha saboolka iyo miyiga, iyo sidoo kale isticmaalka ballaaran ee telemedicine.
Ugu dambeyntiina, shirkadaha taageera isbeddelka dijitaalka ah, oo ay ku jiraan Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, iyo Microsoft ayaa si fiican u taagan oo iska caabin kara hoos u dhaca lama huraanka ah laakiin muddada gaaban ee iibka taleefannada casriga ah, kiniiniga, iyo laptop-ka iyo dakhliga xayeysiinta ee internetka maxaa yeelay waxay leeyihiin deyn yar, Iyo boqollaal bilyan oo lacag caddaan ah ayaa gacanta lagu hayaa. Taa bedelkeeda, suuqyada laga dukaameysto iyo silsiladaha kale ee tafaariiqda jirka ah waxaa ku dhici kara cudurkan faafa.
Dabcan, xilligan, xaaladdan mustaqbalka waa mala awaal. Waxay u maleyneysaa inaan ku guuleysanay inaan ka guuleysano caqabado dhaqaale iyo bulsho oo waaweyn oo uu keenay aafada si uun, ayada oo aan ku dhicin niyad jabka adduunka. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, waa inaan nasiib u yeelannaa inaan ku jirno warshadan markii aan ku sii socono duufaantaan.
Waqtiga boostada: Juun-30-2020